Home News Al-shabaab oo Kordhisay Canshuurta ay ka qaado Suuqyadda Magaaladda Muqdisho!!
Al-shabaab oo Kordhisay Canshuurta ay ka qaado Suuqyadda Magaaladda Muqdisho!!
Kooxda Al-shabaab ayaa waxaa ay xooga-saartay sidii ay u adkeeyn laheed Dhaqaalaha kasoo galo canshuuraha ay ka qaado Suuqyadda waa weeyn ee ku yaalla Magaalada Muqdisho,kuwaasi oo muhiim ah islamarkaana sii raajin kara kobacooda.
Iyadoo Ciidamadda Dowladda iyo Masuuliyiinta Degmooyinka ku Magacaaban joogaan ayeey si aan gambasho laheeyn u qaadaan Lacagta Canshuurta waxaana jirin shaqsiyaad diidi kara in ay bixiyaan lacagtaasi hadii kale waa la dilayaa taasi oo sababtay in qofka ganacsadaha ah bixiya lacagta ay soo dalbadaan.
Ganacsatada qaarkood ayaa u xaqiijiyay Muqdisho Online in markii hore Lacagta laga qaado ee ku dhacdo Gacanta Kooxda Al-shabaab aysan joogto ahaan jirin balse dhowrkii bil ee lasoo dhaafay ayeey joogto ka dhigeen taasi oo loo fasiran karo in ay heleen jaanis weeyn oo ay ku fulin karaan wax walbo oo ay doonaan.
”Shaqsiyaad ka socda Al-shabaab ayaa Goobaha ganacsigga sida suuqa aan joogo ee bakaaraha yimaada lacagta ayeey naga qaadaan si la mid ah sida ay u qaadaan Ciidamada Dowladda”Sidaas waxaa yiri mid ka mid ah Ganacsatada Suuqa bakaaraha.
Als-shabaab in ay xoog ku yeelato Magaalada Muqdisho oo ay kordhaan dilalka ay geeysaneeyso waxaa gundhig u ah dhaqaallaha usii kordhay ee kasoo gala Suuqyadda Magaaladda Muqdisho halkaasi oo su’aal la iska weeydiinaayo aaway Masuuliyiintii amnigga.
Sidoo kale Ganacsade kale oo la hadlay Muqdisho ayaa Yiri”Ma taqaanid Ninka lacagta kaa qaadaya mana diidi kartid lkn Kuwa Dowlada waxaad hubtaa in ay ku dhaceeyso gacan qaldan sidaas ayaanba mararka qaar ku bootbootiyaa”
Dowlada uu hogaamiyo Maxamed C/laahi farmaajo waxaa ay dhex jibaaxeeyso Fashil cad oo aan gambsho laheeyn hadii al-shabaab wadooyinka waa weeyn iyo suuqyadda Canshuurahooda si caadi ah uga qaadayaan.
Dhanka kale Waxgaradka Reer Muqdisho qaarkood ayaa qaba in aysan dowladdu dan iyo heelo ka laheeyn amnigga Caasimadda taasna ay sabab u tahay waxyaabah dhacaya